Qurbajoogta SSC oo ugu baaqay Somaliland in ay ka baxdo gobollada SSC, ayna joojiso colaada ay ka hurinayso mandaqada. – Radio Daljir
Febraayo 14, 2011 12:00 b 0
Buuhoodle, Feb 14 – Qaar kamid ah jaaliyadda gobollada Sool, Sanaag & Cayn ayaa xidhiidho kala duwan oo ay lasoo sameeyeen idaacada Daljir waxaa ay kaga hadleen xaaladda murugsan ee hadda ka taagan gobolka Cayn iyo deegaano hoostaga gobolka Sool.
C/rashiid Galbeedi oo ka mid ah qurbajoogta qaarada Yurub ayaa waxaa uu kaga hadlay xaaladda colaadeed ee deegaanka jirta, arrimaha abaaraha, iyo qaabka looga bixi karo amuurahaasi oo dhan; waxaa uu ku baaqay midnimo iyo isku duubni shacabka dhexdiisa ah, lagana feejignaado kooxaha khaakhuulka ka dhex wada bulshada.
Mar uu la hadlay shacabka gobollada Somaliland ayaa u baaqay in ay deegaankooda ku ekaadaan, faragelinta ay ka wadaan gobollada Sool, Sanaag & Caynna ay joojiyaan. Waxaa uu intaas ku daray in shacabka gobollada Sool, Sanaag & Cayn aanay doonayn dhiig ummad Somaliyeed,
“Walaalayaalow …dhiigiina iyo dhibkiina ma rabno; dalkiina iyo deegaankiinu ha idin deeqo, kuna ekaada; kaayagana noo nabad geliya. Hadii la waayo …qof dhulkiisii iyo maalkiisii loogu yimid, in uu shahiido xaq buu u leeyahay” ayaa uu yidhi.
Md. Galbeedi ayaa waxaa uu tilmaamay in xaaladda xilligan lagu guda jiro looga bixi karo oo keliya iyada oo dadka deegaanku mideeyaan muruqoodda, iyo maskaxdoodda, isagoo sheegay in laga bixi karo duruuf kasta oo timaadda hadii taladda dadku midaysan tahay.
Md. Galbeedi waxaa uu xusay in danta guud ee ummadda Somalidu ay ku jirto is-tixgelin, deris wanaag, iyo wada noolaasho dhinac kasta ah.
Waxaa uu ugu baaqay shacabka guduhu in ay ka digtoonaadaan dadka ku sii dhex dhuumanaya bulshada, ee aan dantooda ka shaqayn.
Mar la weydiiyey qaabka ugu haboon ee deegaanadaasi nabad lagaga dhalin karo ayaa uu sheegay in deegaanadaasi nabad laga dhalin karo oo keliya marka Somaliland ciidamadeeda kala baxdo deegaanadda Sool & Cayn.
Baahin: Khamiis, Feb 17, Weriye Khadar C. Ismaaciil… “Muqdisho caasimad Somaliyed mar waa ahayd” Garaad C/llahi Cali Ciid … Wasiirka kalluumaysiga Puntland oo sheegay in ciidamo hubaysani isku horfadhiyaan balliga Kalshaale, Cayn … “Maxamed Dheere tuhun baan jira in uu lug ku lahaa …intooda kale waa dadkii ficilka gaystay, la og yahay, oo la yaqaan” Duqa magaalada Muqdisho … Xawaalada Amal oo deeq raashin ah guddoonsiisey dan yar ku sugan Laascaanood …